The Square Ụlọ Ụlọ - Imewe Mmewe
Ụlọ Ụlọ Ebumnuche a haziri bụ iji mụọ mmekọrịta mmekọrịta dị n'etiti ihe dị iche iche a na-ekekọta ọnụ iji mepụta mpaghara na-akpụ akpụ. Ihe oru ngo a nwere nkeji isii, nke obula bu ngwongwo mbufe abuo nke edobere ka onwe ha mejuputa L pedị Mkpo L: ndị a ka edoziri ọnọdụ L n'ọkwa dị iche iche na-eke Voids na Solid iji nye mmetụta nke ngagharị na inye ihu ụbọchị zuru oke na ikuku dị mma. gburugburu ebe obibi. Ebumnuche kachasị bụ imepụta obere ụlọ maka ndị na-arahụ n'okporo ụzọ na-enweghị ụlọ ma ọ bụ ebe obibi.
Aha oru ngo : The Square, Aha ndị na-emepụta ya : mohamed yasser, Aha onye ahịa : Mohamed Yasser Designs .
Mohamed Yasser Designs
Ụlọ Ụlọ mohamed yasser The Square